Akwụkwọ ntuziaka njirimara ụlọ ọrụ: ihe ọ bụ na otu esi emepụta otu | Ozi ECommerce
Ọtụtụ ụlọ ọrụ na -eji ntuziaka njirimara ụlọ ọrụ n'etiti akwụkwọ dị n'ime. Akwụkwọ a, nke buru ibu ma ọ bụ nke pere mpe, dị mkpa iji dowe njirimara ụlọ ọrụ kwụ ọtọ, na -enweghị ọdịiche nwere ike imetụta ndị ahịa.
Ma, Gịnị bụ akwụkwọ ntuziaka njirimara ụlọ ọrụ? Kedu uru ọ na -enye gị? Kedu ka esi eme otu? Ọ bụrụ na ịchọrọ ịma ihe niile gbasara akwụkwọ a, naanị ị ga -elele akwụkwọ ntuziaka anyị kwadebeere gị.
1 Kedu ihe bụ akwụkwọ ntuziaka ụlọ ọrụ
1.1 Akwụkwọ ntuziaka njirimara ụlọ ọrụ vs akwụkwọ ntuziaka
2.1 Ị ga -echekwa oge na akụrụngwa na akwụkwọ ntuziaka njirimara
2.2 Ị nwere ịdị n'otu karịa
2.3 Ị na -enye ndị ahịa onyonyo ka mma
3 Otu esi emepụta akwụkwọ ntuziaka njirimara
3.1 Nhazi nke akwụkwọ ntuziaka njirimara ụlọ ọrụ
3.1.1 Okwu mmalite nke akwụkwọ ntuziaka ụlọ ọrụ
3.1.7 Ọgụgụ akwụkwọ
Kedu ihe bụ akwụkwọ ntuziaka ụlọ ọrụ
Ihe mbụ ị ga -achọ ịma bụ ihe okwu ntuziaka njirimara ụlọ ọrụ na -ekwu maka ya. N'okwu a, anyị na -ekwu maka akwụkwọ azụmaahịa nke na -ewepụta iwu na ntuziaka a ga -eso na ụlọ ọrụ iji nye na idobe njirimara ndị ahịa yana ndị ọrụ.
N'ikwu ya n'ụzọ ọzọ, ihe ọ na -eme bụ gosi ihe kacha mkpa ka ihe eserese nke ika ga -adị yana otu esi etinye ha n'ọrụ, ma n'ịntanetị na n'ịntanetị. Ihe dị ka ụdị akara, ụcha, mkpụrụedemede ...
Akwụkwọ ntuziaka ndị a nwere ike bụrụ isi ihe, ọkachasị maka obere azụmaahịa, ma ọ bụ nnukwu akwụkwọ ntuziaka buru ibu na nnukwu ụlọ ọrụ. Na onye na -eji ha eme ihe? Ọ dị mma, ụlọ ọrụ dịka Vodafone, Endesa, Adidas ... nke ụlọ ahịa, wdg.
Akwụkwọ ntuziaka njirimara ụlọ ọrụ vs akwụkwọ ntuziaka
Ị nwetụla mgbe akwụkwọ ntuziaka njirimara ụlọ ọrụ yana akwụkwọ ntuziaka bụ otu? N'ezie ee. Ma nke bụ eziokwu dị nnọọ iche.
Ihe abụọ ahụ yiri ka hà bụ otu ihe, mana ha abụghị. Ọ bụ ezie na akwụkwọ ntuziaka njirimara ụlọ ọrụ lekwasịrị anya n'akụkụ eserese nke ika ahụ, njirimara a na -ahụ anya nke ika ahụ, akwụkwọ ntuziaka ika anaghị anọ naanị na 'ntọala'.
Yabụ, mgbe ị na -ewu otu akwụkwọ na nke ọzọ, n'agbanyeghị na ha nwere ike ijikọ aka, akwụkwọ ntuziaka njirimara ụlọ ọrụ na -anọgide naanị na ndabere nke aha akara.
Ọ bụghị ọtụtụ ụlọ ọrụ nwere akwụkwọ njirimara njirimara yana, agbanyeghị, ịdị adị nke otu, yana iji ya, nwere ọtụtụ uru nke, ikekwe, ị chọpụtabeghị. Anyị na -achịkọta ha:
Ị ga -echekwa oge na akụrụngwa na akwụkwọ ntuziaka njirimara
Were ya na ị na -akwụ onye ọrụ ụgwọ. Ị na -eme ya nlegharị anya nke ụlọ ọrụ ahụ wee gwa ya ihe niile ọ kwesịrị ịma gbasara njirimara ụlọọrụ ...
Ma gịnị ma ọ bụrụ na onye ọrụ ọhụrụ abịarute n'izu sochirinụ? Ị ga -efufu ọtụtụ awa nke oge gị, yana ya na akụrụngwa ị nwere ike iji maka ihe ndị ọzọ.
Akwụkwọ ntuziaka njirimara ụlọ ọrụ na -enye gị ohere iwepụta obere oge, nye naanị ihe ngosi dị nkenke wee dee ozi ịchọrọ iji rụọ ọrụ gị nke ọma maka ụlọ ọrụ ahụ.
Ị nwere ịdị n'otu karịa
Ọtụtụ mgbe, ọkachasị ka oge na -aga, ndị mmadụ na -echefu iwu ndị esoro na mbido. Ọ dị ka a ga -asị na anyị nyere akụkụ aka dị obosara, na, n'ikpeazụ, na -emetụta ụlọ ọrụ ahụ.
Ya mere, iji zere ya, inwe iwu na nkwukọrịta site na akwụkwọ ntuziaka njirimara na -enyere aka ịghara ichefu ha na inwe “akara” nha anya maka mmadụ niile.
Ị na -enye ndị ahịa onyonyo ka mma
N'ihi na site na ịnwe akwụkwọ ntuziaka njirimara ụlọ ọrụ, ị na -agwa ndị ahịa na ị nwere mmasị n'ihi na enwere na -arụ ọrụ nke ọma na ị na -agwa ndị ọrụ gị okwu ka ha mara ihe niile ha kwesịrị ịma gbasara ụlọ ọrụ ahụ.
Otu esi emepụta akwụkwọ ntuziaka njirimara
Na -elekwasị anya n'otú ị ga -esi mee akwụkwọ ntuziaka njirimara, ihe mbụ ị ga -edo anya nke ọma bụ ụdị ozi ị ga -achọ iji kwadebe ya.
N'okwu a, ekwesịrị ịkọwa ya, n'ihi na anyị na -ekwu maka ihe ndị na -ekwesịghị ịgbanwe kwa oge (ebe ihe ọ bụ bụ na ndị ahịa na -akpakọrịta ika ahụ, agbanwela ha abụọ abụọ n'ime atọ):
Oyiyi na akara.
Ihe ndị a niile dị na ntuziaka njirimara ụlọ ọrụ, mana kedu maka ụdị ya? Anyị na -agbaji ya maka gị.
Nhazi nke akwụkwọ ntuziaka njirimara ụlọ ọrụ
Akwụkwọ a ga -enwerịrị usoro ka ozi niile wee ghọta nke ọma na enweghị obi abụọ ma ọ bụ nsogbu mgbe itinye ya n'ọrụ ma ọ bụ na ngwa ọ bụla emere (telivishọn, pịa, bọọdụ mkpọsa, wdg).
Ọdịdị ahụ ga -abụ nke a:
Okwu mmalite nke akwụkwọ ntuziaka ụlọ ọrụ
N'ime nke ọ na -ekwu maka nkà ihe ọmụma, ụkpụrụ, ụdị mmadụ na ụda nke ika a nwere. Ọ dị mkpa ime ka ngalaba a doo anya dịka ọ bụ ihe ndabere maka ịghọta ihe kpatara ihe ndị ọzọ niile.
Akara bụ akụkụ dị mkpa nke njirimara njirimara nke ika ahụ. N'ihi nke a, akwụkwọ imewe, agba na ojiji.
Akụkụ ụfọdụ ekwesịrị ịpụta bụ, dịka ọmụmaatụ, oghere a ga -ahapụrụ gburugburu akara ngosi ka ọ ghara ịdị oke oke, ma ọ bụ nke kacha na nke kacha nta na akara ahụ na -emeghị ka ọ kwụsị ịgụ ma ọ bụ lezie anya.
Ọzọkwa ebe a enwere ike ịnwe ngalaba maka ọdịiche nke akara ngosi, ka ịhụ ka ọ ga -adị na agba dị iche iche, usoro, wdg.
Ọ bụ ezie na anyị ekwuola na mbụ ekpuchila agba ndị ahụ na akara ngosi, na nke a ọ na -abanye na agba, ọkachasị ụkpụrụ agba, nke enwere ike ịtọ n'etiti atọ: RGB, CMYK, HEX ma ọ bụ Pantone (nke ikpeazụ bụ nke a na -ejikarị n'ihi na ọ na -enye ohere ka agba a na -eji bụrụ nke ebipụtara n'ezie, n'otu tonality).
Ngalaba mejupụtara na -egosipụta ntọala isi iwu na imewe ahụ ga -enwerịrị ka ọ dabara na ihe ịchọrọ iji nweta anya site na ika.
Na mgbakwunye na akara ngosi, akara ngosi na ihe ndị ọzọ dị mkpa, ha kwesịrị ịgbaso ụdị akara ngosi n'ozuzu ya. Yabụ ebe a akụkụ dị iche iche dị ka nha ka akọwapụtara n'ime ndị a, agba ha ga -enwe mgbe a na -agbanyeghị ha na mgbe a na -apị ha, ọ bụrụ na ha ga -enwe ụda ma ọ bụ na ha agaghị enwe, ma ọ bụrụ na ederede ha nwere ga -agbanwe, wdg.
N'okwu a anyị na -ekwu maka ya Banklọ akụ ihe onyonyo nke ụlọ ọrụ ahụ ga -enwe na ika ahụ n'onwe ya. Ha nwere ike ịbụ foto kamakwa ihe atụ, eserese ... Ha niile ga -abụrịrị ezigbo mma ma gwọọ ya nke ọma iji bulie ọhụụ nke ika ahụ.
N'ikpeazụ, anyị nwere mkpụrụedemede, ya bụ ụdị font a ga -eji na ika. N'ebe a, akụkụ dị mkpa dị ka nha font, ụdị oghere, ma aga -eji ọchịchịrị na / ma ọ bụ ọkụ ọkụ, ma a ga -enwe isi (H1, H2, H3 ...) na paragraf ma ọ bụ naanị paragraf, wdg. nwee nkọwa ebe a.
Ọ bụrụ na ụlọ ọrụ ahụ buru ibu, na mgbakwunye na isi ihe ndị a na ntuziaka njirimara ụlọ ọrụ, a na -etinye ndị ọzọ akọwapụtara maka ngwa ọ bụla nwere: maka mgbasa ozi mgbasa ozi, akwụkwọ akụkọ, mgbasa ozi weebụ, telivishọn, netwọkụ mmekọrịta, wdg.
Ọ bịara doo gị anya ugbu a ihe akwụkwọ ntuziaka ụlọ ọrụ bụ?
Pathzọ zuru ezu na edemede: ECommerce ozi ọma » Marketing » Akwụkwọ ntuziaka njirimara ụlọ ọrụ: ihe ọ bụ na otu esi emepụta otu